Sweden oo tarxiishay Hooyo labo Caruur ku heysatay Wadanka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo tarxiishay Hooyo labo Caruur ku heysatay Wadanka
Sweden oo tarxiishay Hooyo labo Caruur ku heysatay Wadanka
February 21, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
In kasta oo guur shan sano ah iyo laba carruur ah oo yaryar ay heysato Hooyo Chritalinne ayaa laga masaafiriyay Dalka.
Christalline oo 36 jir ah ayaa la musaafuriyay laguna qasbay in ay ka maqnaato qoyskeeda oo Dalka ku nool.
– Waxay ka qaadayaan xuquuqda carruurta iswidhishka ee ah inay la noolaadaan hooyadood, ayay tidhi.
Walaalaha Astor, oo 4 sano jir ah, iyo Elsa, 2, ayaa si dhakhso leh u waayidoona hooyadood si aan xad lahayn. In kasta oo xaqiiqda ah in Christalline Santos Larsson oo u dhalatay dalka Filibiin ay shantii sano ee la soo dhaafay guursatay Nin Iswiidhishka oo lagu magacaabo Joel Larsson, oo 33 jir ah.
Christalline ayaa toddobaadkan laga masaafuriyey waddanka uu ka soo jeedo ninkeeda. Hay’adda laanta socdaalka ayaan u arkin inay Xaq u leedahay Hooyada sharciga deganaanshaha Iswiidhan sida ku xusan bogga hey’addu in ay qaadan karto sanad.
– Waxay ka qaadayaan xuquuqda carruurta iswidhishka ah inay la noolaadaan hooyadood aniga ahaanna waa wax aan la qaadan karin, ayay tiri Christalline, oo 36 jir ah.
– Waxaan dareemay wax aad u xun oo waan ooyay marar badan markii na diiday hey’adda laanta socdaalka iyo kadib mida maxkamada maamulka.